Izingosi Zokuxhumana Nombukiso Wakho Wezohwebo | Martech Zone
Izingosi Zokuxhumana Nombukiso Wakho Wezohwebo
NgoLwesibili, Septhemba 11, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukube ube nethuba lokulalela ingxoxo yethu noCrystal Grave we Ukuqhuma, uyazi ukuthi sibazisa kangakanani abaxhumanisi bemicimbi. Cishe awukho umsebenzi onzima ekumaketheni ngoba abathengisi bemicimbi abakhulu basebenza ngokuzikhandla kuzo zonke iziteshi futhi basebenze ngezikhathi ezinzima nezenziwa. Awutholi ithuba lesibili ngomcimbi - kufanele uwukhulume kahle okokuqala.
Imicimbi iyindlela enhle yokuxhumana namakhasimende angaba khona, abalingani bokumaketha, abasebenzi abasha kanye nomthelela embonini yakho. Funda ukuthi ungayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana ukuze uthole okuningi ngokuya embukisweni wakho olandelayo.
Ukufanekisa kweNyakatho ntshonalanga uhlanganise le infographic ekuxhumaneni nomphakathi naku-tradeshow yakho. I-Northwest Creative Imaging inikeza amadokodo ombukiso wezohwebo athandwa kakhulu, izibonisi zombukiso wezohwebo, nokuphrinta okukhulu kwefomethi ngamanani aphansi.
Yini Esebenzela Ukwabelana Komphakathi
Ividiyo: I-Youtube Video Revolution 2.0